Tuesday December 29, 2015 - 11:30:20 in Xiriirka Kubadda Cagta by Nocsom Editor
Guddoomiyaha Xiriirka kubadda Cagta Cabdiqani Saciid Carab oo daah furay horyaalka ayaa sheegay in horyaalka sanadkan ay ka qayb galayaan 10 koox isla markaana uu noqonayo horyaalkii ugu horeeyay oo si toos ah loo tabiyo waxuuna uga mahad celiyay Universal TV oo tabinaysay .
Kulanka ugu horeeyay horyaalka waxaa lagu daah furay Kooxda Heegan oo horyaalka difaacansya iyo Dekeddaq oo kaalinta afaraad ka gashay horyaalki tagay.
Labada koox ayaa soo bandhigay cayaar wanaagsan iyadoo kooxda Heegan uu daqiiqadi 45 dhamadka qaybta hore uu roose ka qaatay Maxamed AXmed Maxmuud o No 11 u qaata.
Heegan o 10 cayaaryahan ku cayaaraysa aya qaybta kabaad marki laysku soo laabtay heshay dhowr fursad oo ay gool ku dhalin kartay m basle ka fa’iidayusan wayusay waxaana daqiiqadi 93 gool ka dhaliyay Cadbuqadir Muxyadii Yarisi oo badal kusoo galay.
Waa guuldaradii 3 oo xiriir ah oo soo gaarasya kooxda Heegan, halka Dekedda ay gaartay guushii labaad 7 kulan ay ka hortagtay.
Jaalihii ugu horeeyay ee Horyaalka waxaa qatay Cabaas Amiin Maxamed oo No14 u qaata kooxda Dekedda.
Roosihii ugu horyaalka waxaa qaatay Maxamed Axmed Maxamuud (Larsen) oo No 11 u qaata kooxda Heegan.
Goolkii ugu koowaad horyaalka 2015-16 Waxaa shabaqa ku hubsaday C/qaadir Muxyadiin Xasan (Yariis) oo NO.17 u qaata kooxda Dekedaha.
Kulanka waqxa garsoore ka ahaa Xasan Aadan Xaaji Yabaroow Wiish.
Sawir Qaade: Maxamed Xuseen Qalinle